Wararka - Xaaladda hadda jirta ee dhismaha Gypsum
1940-yadii, biyo-biyo-yar-yar-yar oo laga sameeyay gypsum-ka dabiiciga ah ayaa loo isticmaalay si caalami ah si loogu soo saaro baloogyada 'gypsum blocks' iyadoo loo marayo habka loo shubay caaryada fidsan. Bartamihii-1950-meeyadii, wax-soo-saarkii ayaa loo beddelay shubista caaryada toosan iyo tikniyoolajiyadda jajabka, waxsoosaarkuna si weyn ayuu u kordhay.
Laga soo bilaabo 1970-yadii, tiknoolajiyada wax taaj oo kale ayaa si isdaba-joog ah loo hagaajiyay, iyo geedi socodka qaadista caaryada tooska ah ayaa ka soo baxday semi-otomatik iyo si otomaatig ah. Tusaale ahaan, adeegsiga jareyaasha otomaatigga ee otomaatigga ah si ay u sameystaan ​​jeexjeexyada sare, wasakhahaasi daawaha ayaa loo yaqaan 'chrome-plated' si loo hagaajiyo tayada dusha sare ee badeecada, caaryado badan oo daloollo ah ayaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo wax soo saarka mashiinka keliya, iyo haweenta pneumatic telescopic waxaa loo isticmaalaa in si sax ah loo dhigo, haysa, kor loo qaado oo guur safka dhan ee baloogyada.
Laga soo bilaabo 1990-yadii, gypsum desulfurization gypasum flue ayaa loo isticmaalay inay tahay walxo ceyriin ah si loogu beddelo gypsum-ka dabiiciga ah, tayada alaabooyinka si isdaba-joog ah ayaa loo hagaajiyay.
Baloogyada 'Gypsum blocks' ayaa la soo saaray oo loo adeegsaday in ka badan 60 waddan oo adduunka ah, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo sida gidaarrada qaybsiga ee aan rarka lahayn ee guryaha, xafiisyada xafiisyada, hudheelada, iwm.
Waxaa caalami ahaan la aqoonsan yahay in qalabka loo yaqaan 'gypsum block' uu yahay alaab dhismeedka cagaaran ee waarta, oo ka dhigan in ka badan 30% wadarta guud ee derbiyada gudaha ee Yurub. Wadamada yurub ee soo saara isla markaana adeegsada dhismooyinka loo yaqaan 'gypsum blocks' waxaa ka mid ah Ruushka, Faransiiska, Jarmalka, Beljam, iyo Spain, Poland, Talyaaniga, Austria, Switzerland, Luxembourg, Greece, Turkey, Finland, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Serbia, iwm.
Marka laga soo tago dhulweynaha Shiinaha, waxaa jira 15 dal iyo gobollo ka tirsan Aasiya oo soo saaraya bucshiro loo yaqaan 'gypsum blocks', oo wadar ahaan qiyaastii ah 2,000 oo goobood oo wax soo saar ah. Wadamada iyo gobolada ugu waaweyn ee soosaara Gippsum-ka Aasiya waa: Hindiya, Koonfurta Kuuriya, Singapore, Thailand, Indooniisiya, Baakistaan, Afgaanistaan, Fiyetnaam, Bangaladheesh, iwm; Bariga Dhexe waxaa ka mid ah Iran, Saudi Arabia, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Oman, Iraq, IWM Wadammada Afrika ee wax soo saarka dhismaha ee loo yaqaan 'gypsum block' waa Aljeeriya (2 milyan oo mitir murabac / a), Masar, Marooko, Tunisia, Senegal, iwm.
Kaliya Mexico ayaa soo saarta dhismooyinka 'gypsum blocks' ee Waqooyiga Ameerika. Soosaarayaasha bucshiradda Koonfurta Ameerika waa Brazil, Chile, Argentina, Venezuela, iyo Colombia. Kaliya Australia ayaa soo saarta bucshirooyinka 'gypsum blocks' ee ku yaal Oceania.